» चर्चित संचारकर्मी रबि लामिछानेलाई ठगिको आरोप लगाउने व्यक्ति को हुन ? हेर्नुहोस चर्चित संचारकर्मी रबि लामिछानेलाई ठगिको आरोप लगाउने व्यक्ति को हुन ? हेर्नुहोस – हाम्रो खबर
चर्चित संचारकर्मी रबि लामिछानेलाई ठगिको आरोप लगाउने व्यक्ति को हुन ? हेर्नुहोस
काठमाडौ । न्यूज २४ टेलिभिजनवाट भर्खरै विदा लिएका चर्चित टेलीभिजन प्रस्तोता रवी लामिछाने विरुद्ध ठगीको आरोप लागेको छ।
लामिछानेले न्यूज २४ टेलिभिजनबाट ‘रियालिटी शो’ ‘द लिडर’ प्रशारण गर्ने भन्दै सहभागिवाट रकम असुल गरी कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको आरोप छ । शोमा सहभागि हुन आवेदन दिएका काठमाण्डौंकै एक सहभागिले नेपाल आजमा सम्पर्क गरी लामिछानेले हजारौं युवालाई ठगी गरेको आरोप लगाए।
भाषण र भिजन दुवैका आधारमा विजेता छनोट गरिने र प्रतिस्पर्धीबाट ‘द लिडर’ का विजेतालाई काठमाण्डौमा अपार्टमेन्ट, गाडी र २० लाख रुपैयाँबाट पुरस्कृत गरिने भनिएको थियो । आयोजकले कार्यक्रमले एक कुशल र असल राजनीतिक नेता जन्माउने दाबी गरेको थियो। – नेपाल आज बाट